ဟာသ စုစည်းမှု ( ၃၁-၇ ) ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
ညအချိန် လမ်းထောင့်တစ်နေရာတွင်..အမျိုးသမီးငယ် တစ်ယောက်ကို လူဆိုးက
ဓါးနှင့်ထောက်ပြီး ပြောသည် ။
ဓားပြ ။ ။ " လူ့ ပြည်မှာ နေချင်သလား.."
အမျိုးသမီး ။ ။ " ဘယ်သူနဲ့ လဲ.."
ဓားပြ ။ ။ " ပိုက်ဆံပါသလား "
အမျိုးသမီး ။ ။ " ဘယ်လောက် လိုချင်လို့ လဲ.."
ဓားပြ ။ ။ " အ၀တ်အစားတွေ အကုန်ချွတ်စမ်း "
အမျိုးသမီး ။ ။ " ရှင်ကော.."
ဓားပြ ။ ။ " ဟေ့ ကောင်မ စကားကို ကောင်းကောင်းပြော...ငါ ဓါးပြတိုက်နေတာကွ..
အမျိုးသမီးတယောက် ဘူတာရုံမှတည်းခိုခန်းသို့ရောက်လာသည်… မန်နေဂျာအား
အခန်းရဦးမလား မေးသည် မန်နေဂျာမှ ဟာ … အခန်းကုန်သွားပြီ…
မရှိတော့ဘူး…. အမျိုးသမီးက … အို ရအောင်လုပ်ပေးပါ…
အချိန်လည်းမရှိတော့ဘူး… တခြားကိုသွားဖို့မလွယ်လို့ပါ… ထိုအခါ
မန်နေဂျာမှ .. အင်း.. ခင်ဗျားလိုချင်ရင် တစ်ခန်းတော့ရှိတယ်… ဒါပေမယ့်
အဲဒီအခန်းထဲမှာ ယောင်္ကျား (၃) ယောက် ရှိတယ်….
သူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေနိုင်ရင်တော့ ခင်ဗျားတစ်ယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေး အိပ်လို့ရမယ်…. အဲ.. မဖြေနိုင်ရင်တော့
အမျိုးသမီးမှ …ရတယ်လေ… အဲဒီအခန်းကိုပဲပေးပါ… အခန်းထဲရောက်သောအခါ ….. ယောင်္ကျား (၃)ယောက်က အမျိုးသမီးအားမေးသည်
အပင်ကပုပု.. အသီးကနီနီ.. အဲဒါဘာသီးလဲ…
အဖြေမှန်မှာ စတော်ဘယ်ရီသီးဖြစ်သည်… အမျိုးသမီးကလည်းသိသည်.. သို့သော်
ခရမ်းချဉ်သီးဟုဖြေလိုက်သည်… သို့နှင့် သူတို့အိပ်လိုက်ကြသည်…။
ဖြေသည်… နောက်တစ်နေ့မိုးလင်းသော်…. အခန်းထဲမှ ….. အမျိုးသမီးရော
သွားကြည့်သည်… ထိုအခါအခန်းထဲတွင် ယောင်္ကျားသုံးယောက်မှာ ကုတင်အောက်မှ
ဒူးတုပ်ထိုင်ပြီး အမျိုးသမီးအားတောင်းပန်နေသည်… လုပ်ပါအစ်မရယ်….
အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ အသိမိတ်ဆွေ ဖြစ်ပြီး ညတစ်ညလုံး အတူတူ အချိန်ဖြုန်းလိုက်ကြသည်။
နောက်တစ်နေ့ မနက်တွင် အမျိုးသမီးက မေးသည်။ “ရှင့်မှာ AIDS ရောဂါ ကင်းရှင်းကြောင်း ဆေးလက်မှတ်ရှိလား။
´´ “ရှိတယ် ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲ။´´
“သြော်….လွှင့်ပစ်ချင်ရင် လွှင့်ပစ်လို့ ရတယ်လို့ ပြောမလို့ပါ။´´
မင်းကို ငါ အရမ်းချစ်တယ်(18+)
အကျဥ်းသား တစ်ယောက် အကျဉ်းထောင်တွင်း ၁၅နှစ်ကြာနေပြီးမှ ထောင်ဖောက်ထွက်ပြေးလွတ် မြှောက်လာကာ ပိုက်ဆံမရှိသည်.အတွက် ညကြီး မင်းကြီး အိမ်တအိမ် ပေါ်တက်ပြီး ဓါးပြတိုက်ဖို.ကြိုးစားပါတော.တယ်။
ဖြစ်ချင်တော. ထိုအိမ် တွင် ညှားခါစလင်မယားနှစ်ယောက် ခုတင်ပေါ်အိပ်ဖို. ပြင်နေချိန်နှင်. ကိုက်သွားကာထိုအကျဉ်းသား သည် ယောင်္ကျားကို ခုတင်ပေါ်မှ ဆွဲချကာ ထိုင်ခုံ ပေါ်တွင် ကြိုးနှင်. တုပ်ထားပြီး ။ မိန်းမ ကို ခုတင်ပေါ်တွင် ကြိုးနှင်.ချည်ထားလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော. မိန်းမကို အပေါ်က နေ တက်ခွ ပြီး နမ်းလိုက်ကာ။ရေချိုးခန်းရှိရာ သို. ရုတ်တရုတ် ထသွားပါတယ်။
ယောင်္ကျား -“ဟေး အဲ. လူကြည်.ရတာ ထောင်ထွက်နဲ.တူတယ်။ ဒီတော. သူမိန်းမ ငတ်နေတာ နှစ်နဲ.ချီ နေလောက်ပြီ၊ မင်းကိုတောင် နမ်းလိုက်သေးတယ်။ တကယ်လို.သူမင်းကို တခုတခုလုပ်မယ်ဆိုရင် လဲ အသာတကြည် လက်ခံလိုက်နော်။ သူ စိတ် ဆိုးရင် မင်းရော ငါရောအသက်အန္တရယ် ရှိနိုင်တယ်။ စိတ်ခိုင်ခိုင်ထားနော် အချစ်၊ မင်းကို ငါ အရမ်းချစ်တယ်”
မိန်းမ - “အမ်… သူ မိန်းမကို နမ်းတာ ဟုတ်ဘူး၊ မိန်းမ ကို နားကပ်ပြီး တိုးတိုးလေး ပြောသွားတယ်။ ငါယောင်္ကျား ငတ်နေတာ ကြာပြီ အေ.၊ ထောင်ထဲမှာ ညဉ်းယောင်္ကျား လိုဟာမျိုး လုံးဝ မရှိဘူး။ ဆင်လိုက်တာဟယ် ၊ ညဉ်းမှာ အဖော် အပိုရှိလား ဆိုလို. မိန်းမက ရေချိုးခန်းထဲ မှာ အထုပ်လိုက် ရှိတယ်ဆိုတာနဲ. ၊ သူသွားယူနေတယ်။ စိတ်ခိုင်ခိုင်ထားနော် အချစ်၊ မင်းကို ငါ အရမ်းချစ်တယ်”